पोग्बा कुशल नेतृत्वकर्ता हुन् : फ्रान्सेली प्रशिक्षक डेसच्याम्प्स - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
पोग्बा कुशल नेतृत्वकर्ता हुन् : फ्रान्सेली प्रशिक्षक डेसच्याम्प्स
फ्रान्सेली फुटबल टोलीका प्रशिक्षक डिडिएर डेसच्याम्प्सले आफ्ना मिडफिल्डर पाउल पोग्को खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । पोग्बाले राष्ट्रिय टोलीबाट जुन प्रदर्शन गर्छन् त्यो प्रदर्शन क्लबबाट भने गर्न नसकेको भन्दा आलोचना हुने गरेको छ ।
जोसे माउरिन्होको प्रशिक्षणमा रहेको म्यानचेस्टर युनाइटेडमा पोग्बाले अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्दै बेला बेला चर्चा हुने गरको छ । तर, डेसच्याम्प्सले भने पोग्बाले व्यक्तिगत भन्दा पनि टोलीबाट बारेमा सोच्ने गरेको बताए ।
‘विश्व फुटबलमा वा भनौ फ्रान्समा उनका बारेमा जे धारणा बनाइएको छ । उनमा त्यो मिल्छ जस्तो लाग्दैछ,’ लन्डनमा भएको फिफा फुटबल कन्फ्रेन्समा अतिथिका रुपमा बोल्दै डेसच्याम्पसले भने,‘ उनी सन् २०१३ देखि राष्ट्रिय टोलीमा छन् । मलाई लाग्छ उनी सधै सामूहिक प्रदर्शनका बारेमा सोच्ने गर्छन् ।’
डेसच्याम्पसले पोग्बालाई एउटा नेतृत्व क्षमता भएको खेलाडीका रुपमा समेत प्रशंसा गरे । ‘ उनी विश्व कप खेल्नअघि मानिसिक रुपमा नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत भएका थिए, उनले स्मरण गरे,‘ मैदान भित्र वा बाहिर उनी नेतृत्व गरिरहेका हुन्थे । उनी टोलीको एक किसिमका प्रवक्ता हुन् । किनकी उनी राम्रो वक्ता पनि हुन् ।’
डेसच्याम्प्सले चेल्सीका स्ट्राइकर ओलिभर जिरुडको प्रति तारिफ गरे । रसिया विश्व कपमा फ्रान्स च्याम्पियन बन्दा गोल गर्न नसकेपछि जिरुड टोलीको महत्वपूर्ण सदस्य रहेको प्रशिक्षकले बताएका छन् ।
‘हो उनले गोल गर्न सकेनन् । तर उनीले जसरी खेले , जसरी रक्षापंक्तिलाई साथ दिए त्यो निकै महत्वपूर्ण थियो,’ उनले थपे,‘ दुई तीन खेलाडीलाई बिट गर्ने अपेक्षा राख्नु हुँदैन । उनी त्यसका लागि टिममा थिएनन् । तर, उनी एकदमै महत्वपूर्ण खेलाडी हुन् । समग्रतामा उनको प्रदर्शन उत्कृष्ट थियो ।’ hamrokhelkud बाट
योंग बोइज विरुद्ध रोनाल्डोले गोल गरे क्लबमा २ नया रेकर्ड र इतिहास बन्ने !! मेस्सीसंग १ रेकर्ड
ह्याट्रिक हिरो ‘मो. सलाह’ले म्यान अफ द म्याच इन्कार गर्नुको कारण बाहिरियो !!
नेयमार भन्छन् : मेरो रोजाईमा रोनाल्डो भन्दा मेसी माथि
पी.एस.जी जानु अघि ‘एम्बाप्पे’ले गरेका थिए यी क्लबहरुलाई इन्कार
८ महिना मै बिल्बावका हेड कोच वर्खास्त !!